Yintoni umphumo weParallax: iimpawu eziphambili kunye neminye imizekelo | Abadali be-Intanethi
Kukho iziphumo ngaphakathi koyilo, ezisinceda senze oopopayi ababonakalayo. Isenokuba yinxalenye yento esiyaziyo njengethiyori yomfanekiso okanye imbono yomfanekiso. Kuyilo, xa sithetha ngale thiyori, kungenxa yokuba kufuneka siqonde kwaye sinxulumanise, ngokusebenzisa i-synthesis, indlela umfanekiso othile oziphatha ngayo kwimeko ethile.
Yiyo loo nto kule post, size kuthetha nawe malunga nempembelelo yeparallax. Isiphumo esimangalisayo esiyinxalenye yoyilo, kwaye amaxesha amaninzi asikwazi ukukhulelwa njengabantu, kodwa nangona kunjalo, ngamanye amaxesha, ihlala ijikeleze kuthi.
1 Isiphumo seParallax
2 Usetyenziso oluphambili lwesiphumo seParallax
2.2 Umzobo okanye uyilo lwewebhu
3 Eminye Imiphumo
3.1 Imithetho yeGestalt
3.1.1 Umgaqo-siseko wokufana
3.1.2 Umgaqo wokuqhubekeka
3.1.3 umgaqo wokuvala
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, isiphumo seParallax okanye eyaziwa ngokuba yimpembelelo yokuskrola, yaziwa njengempembelelo ekhoyo kakhulu kwinkalo yombono womntu. Njengayo nayiphi na impembelelo, igcina into esiyiqondayo njengemibono ye-optical illusions, kakuhle, esi siphumo sidala uhlobo lwe-optical illusion kwaye ngenxa yoko, sele lukhona kwaye lube yinxalenye yentsimi yoyilo.
Kodwa, ingaba yintoni umphumo eneneni ngayo yonke into esikuxelela yona? ichaphazela indlela esibona ngayo kunye nokubeka izinto kwindawo yethu yombono. Umzekelo, ukuba sibeka iapile etafileni kwaye siyibone ngeso lasekunene okanye lasekhohlo ligqunyiwe, ngelixa elinye livuliwe njalo njalo, intsimi yethu yombono iya kuthi emva koko itshintshe ukusuka ekuqaleni kwethu ukuyibona.
Ngale ndlela, iapile liya kujongeka ngathi lihambile ngenxa yesizathu esithile. Isisombululo sale conundrum sisithuba esikhoyo emehlweni ethu, esivumela into esiyijongileyo ukuba yenze umphumo oshukumayo okanye wokutsiba.
Impembelelo ye-parallax ikwayinxalenye yento esiyaziyo njengembono yendawo. Indawo yindawo apho izinto zifumaneka khona, nazo zichazwe ngokufanelekileyo njengendalo esingqongileyo. Ukuba senza umsebenzi olula wokuhambisa umnwe okanye intloko, sinokubona ukuba zingaphi izinto ezisijikelezayo ezihambayo ngexesha elifanayo kunye nokuhamba kwethu.
Esi siphumo kwakhona Ifakwe kakhulu kwindawo enemigangatho emithathu, umzekelo, ezinye izinto ezenziweyo okanye izithunzi ziyadlala apha. Kwithiyori yomfanekiso, xa sithetha ngepsychology yomfanekiso, sikwathetha malunga nendlela iliso lethu elikwazi ngayo ukunxulumanisa iikhonsepthi ngokwalo kunye nendlela elinokubona ngayo into ebonwe kube kanye ukuya kuthi ga kwiindlela ezintathu ezahlukeneyo.
Ngamafutshane, esi siphumo sibekwe kwimeko ephezulu kwihlabathi loyilo. Kodwa ngaba uyazi ngenene ukuba ungasixelela njani ukuba usetyenziso lubekwe phezu kwalo? Ewe, ukuba ukuza kuthi ga ngoku kubonakala ngathi yinto entsonkothileyo kuwe, zilungiselele kuba ke siza kucacisa ukuba loluphi usetyenziso olusekwe kulo ukusebenzisa oku. Isiphumo kunye nesizathu sokuba benze oko. Impendulo inokubonakala ilula, kodwa ukuyiqonda kufuneka sivule intsimi yethu yengqondo kwaye sisebenzise umbono we-peripheral kunye nesayensi yesi siphumo esibonakala singaqhelekanga.
Usetyenziso oluphambili lwesiphumo seParallax
Abaqulunqi abaninzi baye basebenzisa le mpembelelo okanye ezifanayo ngenxa yento eyivelisayo kunye neyonke into kwabo bayibonayo. Umzekelo, yimeko yemidlalo yevidiyo. Yaye akufanele kulindelwe, ekubeni bebesoloko bezama ukubamba ingqalelo ngendlela yokuba iliso lethu likwazi ukulandela intshukumo yendawo okanye imeko ethile ngemizuzwana nje.
Kwimidlalo yevidiyo, esi siphumo sibekwe kakhulu kwimeko yokuhamba kwezinto, ezikwabizwa ngokuba kukuskrola ecaleni. Ukuza kuthi ga ngoku, akwaziwa ukuba eminye yale midlalo yevidiyo isazigcina ezi ziphumo, kodwa ukuba sibuyela kwi-90s, ewe. Masikhumbule ukuba, ekuqaleni kwexesha lomdlalo wevidiyo, i-dimensionality-three-dimensionality okanye i-two-dimensionality yaqala ukudlalwa ngayo. Imidlalo efana noMario Bros apho umlinganiswa asebenzise olu hlobo lwentshukumo, yabangela ukuba umbukeli ahlule imvelaphi yomlinganiswa kunye nezinto ezizibeke kwimeko yazo. Ngale ndlela kwabonakala ngathi umdlalo wevidiyo wawunwenwela kwiindawo ezintathu okanye ezine.
Ukuba yintshukumo ekhawulezayo kakhulu, iliso lombukeli lenza ingqiqo yobunzulu apho kubonakala ngathi umdlalo uza kukufunxa ngaxa lithile.
Umzobo okanye uyilo lwewebhu
Ukuba sithetha ngoyilo kwaye sisuke kwihlabathi lemidlalo yevidiyo, siyifumana kuyilo lwewebhu. Uyilo lwewebhu, njengoko igama lalo libonisa, lunikezelwe ekudalweni kunye nokwenziwa ngokwezifiso kwamaphepha ewebhu. Lelinye lamasebe oyilo lwegraphic kwaye ukuza kuthi ga ngoku, iye yaba ngomnye wemisebenzi efunwa kakhulu. Kodwa ke, yintoni ubudlelwane phakathi kwempembelelo yeparallax kunye noyilo lwewebhu?, ezininzi iimpawu ezifana ne-Adidas, zaqala phakathi kwe-2002, ukudala amaphepha ewebhu, kunye nokusetyenziswa kwezi ziphumo.
Eyona njongo iphambili yolu setyenziso yayikukubamba ingqalelo yoluntu, ngokwenza indawo emacala mabini kwaye ithatha ithuba lokuba iphepha lewebhu liyinto apho inokuhanjiswa khona, bafuna ukuyihlengahlengisa ngendlela abanokuthi ngayo. inokunyusa inkangeleko-ntathu. Yinto esiyaziyo ngoku njengesenzo sokuhambisa ikhesa phezu kwephepha kwaye umfanekiso okanye into ethile inokusilandela kunye nentshukumo yayo.
Ngamafutshane, esi siphumo sikwaluncedo kakhulu ukuba ucinga ukwenza uyilo lwephepha elithile lewebhu okanye indawo.
Ngamafutshane, ezi ziphumo bezikhona kakhulu kubomi bethu bemihla ngemihla kwaye ziyaqhubeka, kuba indawo esingqongileyo iya kuhlala ikhona. Kufuneka kwakhona kuqatshelwe ukuba, ukuba sithetha malunga nokuthengisa, iinkampani ezininzi zisebenzisa ezi zixhobo apho kunokwenzeka ukuzisebenzisa kwiikhankaso zentengiso. Impembelelo yeparallax ayikho into entsha, njengoko ikhona kuyo nayiphi na intsimi yoyilo. Okulandelayo, siza kuthetha ngezinye iziphumo ezibonakalayo eziye zasetyenziswa kuyilo kwaye ezinokuba nomdla kuwe ukuba uzisebenzise kwiiprojekthi zakho. Gcina ukhumbule ukuba sithetha ngakumbi ngokwasengqondweni kunemiba yobugcisa.
Ukuba sithetha ngeziphumo kwimbono yomntu, Sikwathetha ngemithetho yeGestalt. Le mithetho iluhlu lweengcamango, ezenziwe ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX ngu-psychologist uMax Wertheimer. Injongo ephambili yale mithetho yayiyisifundo sendlela umntu angakwazi ngayo ukuguqula iifom kunye nezinto kunye nokuzihlanganisa okanye ukuzohlula ngokusebenzisa intsimi yethu yokujonga kwaye kamva, yintoni eyenziwa engqondweni yethu ngentsimi ebonakalayo.
Kukho imithetho engaphezulu kwe-7, ngamnye kubo ugcina iimbono ezahlukeneyo, ezivelisa utshintsho olutsha kuthi.
Umgaqo wokufana ngomnye wemithetho eyenza imithetho yeGestalt. Into ethethwa ngulo mthetho kuthi kukuba, ukuba uyilo okanye umfanekiso wenziwe ngothotho lwezinto ezifanayo, ngokombala okanye isimo somzimba, umntu owenza umfanekiso-ngqondweni wesiganeko esixeliweyo, uya kudala umboniso olungeleleneyo nohambelanayo engqondweni yakhe nganye kwezo zinto okanye izinto.
Yinto esiyaziyo njengesiphumo esingaqhelekanga, isiphumo esizama ukwaphula kwaye sibonise ezinye zezinto njengezinto eziphambili.
Ngokutsho kwengqondo yomfanekiso, ukuba sibeka izinto ezininzi kwindawo ukuze zilandele indlela ethile, iliso lomntu liya kuthambekela ekuzilandeleni ngokujonga. Kwenzeka oku ukuba sinomfanekiso-ngqondweni womdyarho weemoto, apho kukho izinto ezingaphezu kwesihlanu ezibekwe enye emva kwenye.
Xa zombini iimoto zihamba, iliso lethu lilandela intshukumo efanayo kuba lidla ngokunikela ingqalelo kuloo nto ithile. Ngokuqhelekileyo, kuyilo, lo mthetho usetyenziswa xa into kufuneka igxininiswe kwaye injongo yombukeli kukugxila kuyo kuphela.
Umgaqo wokuvala ngomnye wemithetho eyinxalenye yethiyori yeGestalt. Izama ukubeka phambi kwamehlo ethu umzobo othi, ngenxa yeefom zawo, awuvali ngokupheleleyo, ngoko kukho izithuba ezimhlophe ezingenanto ezinokuthi ingqondo yethu ibe nenjongo yayo ephambili, ukuyidibanisa kwaye ngaloo ndlela idale umfanekiso oyingqayizivele.
Kuyilo, siwusebenzisa lo mthetho nanini na sifuna uzinzo, ngale ndlela, Iifom ezivaliweyo zihlala zithathwa njengezinzile ngakumbi kuneefom ezivulekileyo, ezivelisa ingqiqo yokulinganisela.
Njengoko siye sakwazi ukuqinisekisa, uyilo alukho kuphela kwimiba yobugcisa: iileya, imifanekiso, ii-vectors, ii-inks zePantone, iifonti, isazisi senkampani, iipowusta, izixhobo zokuyila, njl. Ikwasisigaba apho isayikholoji ingena khona. Ngale ndlela, umyili olungileyo kufuneka abe nakho zombini ukwazi ukwenza isiqwenga ngasinye esichazwe apha ngasentla, kwaye azi ukuba zichazwa njani kwaye usoloko unesizathu sokuyenza ngalo mzuzu.
Ukuba uyithandile le post yesayensi ngakumbi, ungaqhubeka nokuphanda ngakumbi ngemithetho yeGestalt okanye i-parallax effect.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Yintoni umphumo weparallax
Ufumana malini umyili wegraphic eSpain